The CW – Networks – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Originals (2013) Season4Complete Unicode The Originals ဆိုတဲ့ TV Series တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ Vampire Diaries တို့ Vampire ဇာတ်လမ်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေက The Originals ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာ သိမှာပါ .. Vampire Diaries ထဲမှာဆိုရင်လည်း စာဗေတွိုင်းညီနောင်တွေထက် ကြမ်းတဲ့ Original Vampire တွေရှိပါတယ် Klaus တို့ မိုက်ကယ်လ် တို့ပေါ့ သူတို့က Vampire တွေရဲ့ မူလအစပေါ့ .. ခု Series က Vampire တွေရဲ့ မူလအစ တွေရဲ့ Series .. သောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ Vampire တွေကို တွေ့ရမှာပါ .. ဒီ Series ကို ရိုက်ကူးပေးထားတာက Julie Plec ပါ ...
TMDb: 8.6/10 2218 votes
The 100 (2014) Season7Complete Unicode The 100 ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Season7လာပါပီ။ ဒီ Season က The 100 အတွက်နောက်ဆုံး Season ဖြစ်ပါတယ်။ Channel M-Sub မှာ Season 1 To7အထိစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူများအားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဒီ Series အဆုံးသတ်သွားပေမဲ့ သူနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ Series တွေထပ်ထွက်နိုင်သေးပါတယ်။ အဲ့ အခါကျရင်လဲ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးပါအုံးမယ်။ Season 1 To7အထိဆို အပိုင်း ၁၀၀ အထိရှိပါတယ်။ ဘာသာပြန်ပေးသူများကိုလဲ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဒီ Season ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi The 100 ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ Season7လာပါပီ။ ဒီ Season က The 100 အတြက္ေနာက္ဆုံး Season ...
TMDb: 7.8/10 5590 votes
The 100 (2014) Season6Complete Unicode The 100 ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Season6ကို Blu-ray Quality နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ဘယ်လို စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ ကလက်တို့ ကြုံတွေ့ပီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကျပါအုံး ဒီ Season ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi The 100 ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ Season6ကို Blu-ray Quality နဲ႔တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ဘယ္လို စြန႔္စားခန္းေတြနဲ႔ ကလက္တို႔ ႀကဳံေတြ႕ပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းျပမလဲဆိုတာကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္က်ပါအုံး ဒီ Season ကို ဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Van ျဖစ္ပါတယ္ Quality - Blu-ray 1080p Episode 1 Server M-File Episode2Server M-File Episode3Server M-File Episode4Server M-File Episode5Server M-File Episode6Server M-File Episode7Server M-File Episode 8 Server M-File Episode9Server M-File Episode 10 Server M-File Episode 11 Server M-File Episode ...
The Originals (2013) Season3Complete Unicode The Originals ဆိုတဲ့ TV Series တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ Vampire Diaries တို့ Vampire ဇာတ်လမ်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေက The Originals ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာ သိမှာပါ .. Vampire Diaries ထဲမှာဆိုရင်လည်း စာဗေတွိုင်းညီနောင်တွေထက် ကြမ်းတဲ့ Original Vampire တွေရှိပါတယ် Klaus တို့ မိုက်ကယ်လ် တို့ပေါ့ သူတို့က Vampire တွေရဲ့ မူလအစပေါ့ .. ခု Series က Vampire တွေရဲ့ မူလအစ တွေရဲ့ Series .. သောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ Vampire တွေကို တွေ့ရမှာပါ .. ဒီ Series ကို ရိုက်ကူးပေးထားတာက Julie Plec ပါ ...
TMDb: 8.5/10 1780 votes
The Originals (2013) Season3Complete
The 100 (2014) Season5Complete Unicode Season4အပြီးမှာ Nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေပြိုကျပီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး လူမနေနိုင်အောင် Clean ဖြစ်ခဲ့ပီး ၆နှစ်ကြာတဲ့ အခါမှာမှ ဇာတ်လမ်းစထားပါတယ်။ အာကာသပေါ်ရောက်ရှိသွားတဲ့ လူတစ်စုရယ် ကလုတ်တွင်းတဲ့ ပုံးအောင်းနေတဲ့ လူတွေရယ် နောက်ထပ် ရောက်ရှိလာတဲ့ စစ်တပ်ဆန်ဆန် လူတစ်စုရယ် သူတို့သုံးဖွဲ့သားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ . . . ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Season4အၿပီးမွာ Nuclear ဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြၿပိဳက်ပီး ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံး လူမေနႏိုင္ေအာင္ Clean ျဖစ္ခဲ့ပီး ၆ႏွစ္ၾကာတဲ့ အခါမွာမွ ဇာတ္လမ္းစထားပါတယ္။ အာကာသေပၚေရာက္ရွိသြားတဲ့ လူတစ္စုရယ္ ကလုတ္တြင္းတဲ့ ပုံးေအာင္းေနတဲ့ လူေတြရယ္ ေနာက္ထပ္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ စစ္တပ္ဆန္ဆန္ လူတစ္စုရယ္ သူတို႔သုံးဖြဲ႕သားဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာေတာ့ . . . ဒီ Series ကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Van ျဖစ္ပါတယ္ Quality - Blu-ray 1080p Episode ...
The 100 (2014) Season5Complete
The Originals (2013) Season2Complete Unicode The Originals ဆိုတဲ့ TV Series တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ Vampire Diaries တို့ Vampire ဇာတ်လမ်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေက The Originals ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာ သိမှာပါ .. Vampire Diaries ထဲမှာဆိုရင်လည်း စာဗေတွိုင်းညီနောင်တွေထက် ကြမ်းတဲ့ Original Vampire တွေရှိပါတယ် Klaus တို့ မိုက်ကယ်လ် တို့ပေါ့ သူတို့က Vampire တွေရဲ့ မူလအစပေါ့ .. ခု Series က Vampire တွေရဲ့ မူလအစ တွေရဲ့ Series .. သောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ Vampire တွေကို တွေ့ရမှာပါ .. ဒီ Series ကို ရိုက်ကူးပေးထားတာက Julie Plec ပါ ...
TMDb: 8.5/10 1615 votes